Fifanoherana lavareny • AoRaha
Ifandroritana avokoa ny raharaha politika eto Madagasikara, nefa tsy mety misitraka ny tombony tokony ho azony avy amin’izany ny vahoaka. Ady lava tsy misy fitsaharany, raha vao mamofompofona seza.
Lavitry ny fikatsahana ny soa iombonana matetika ny fifanakalozan-kevitra eo amin’ireo samy mpikatroka efa goaik’antitra. Tao anatin’ny andro maromaro izao no namelona indray ny fifandirana momba an’io fametrahana ny filohan’ny mpanohitra etsy amin’ny Antenimierampirenena io. Soa fa tsy misy azo anambakana vahoaka intsony ny fisafidianana an’izay ho mpitarika an-dry zareo ireo, ka hoe hanaovana fifidianana manokana.
Miezaka ny manatsara tena ireo mpanao politika. Manao lahateny tsara lahatra. Raha ny marina dia ny fisehoana no zava-dehibe ho an’ny sasany. Kajikajy madinika kosa ho an’ny hafa. Vao mba manao jery todika tamin’ny lasa anefa, dia tsapa ny lesoka goavana teo amin’ny fomba nanoherana teto amintsika. Nanjaka ny bontolo, satria ny hanongana sy handrodana ny fanjakana mijoro no toa tanjona farany nokendren’ireo rehetra nitonona ho mpanohitra teto amin’ny firenena. Tsy tazana teto izany mpanohitra mitondra fanakianana ho fanatsaran-javatra izany.
Mazava ho azy koa fa tsy nampivoatra ny fanaovana politika hatramin’izay ny fanohanana an-jambany an’izay mpitondra am-perinasa. Anarany fotsiny ny famaritana ny Nosintsika ho firenen’ny demokrasia, indrindra taorian’ny fitsanganan’ny Repoblika fahatelo, fa fihatsaram-belatsihy nifangaroan’ireo mpanao politika te hahazo fahefana sy ireo pôlitisiana te hifikitra amin’ny fahefana no nanjaka teto. Nikaroka sady nanao ny fomba rehetra hanafoanana ny mpanohitra ireo mpitondra, na io vely kibay ara-politika, tamin’ny alalan’ny fanenjehana sarontsaronan’ny fampiharana ny lalàna; na fifanandrinana mivantana teny an-kianja, tahaka ny fifanenjehan’ny mpitandro filaminana sy ireo mpanao fihetsiketsehana an-dalambe. Tsy misy velively ny antoka hatreto hoe hiova tokoa ny fanaovana politika eto Madagasikara, ka atokisana ny fahendren’ny mpitondra, moa mendri-piderana ny fihetsiky ny mpanohitra. Fantatra foana hoe inona avy ny tanjon’ny an-daniny sy ny an-kilany.
Toa tsy vahaolana ihany koa anefa, mandrak’ity ny androany, ny fiandrasana ny fifidianana izay noheverina fa hahafahan’ny vahoaka misafidy an’izay antoko sy mpanao politika tena hikatsaka marina an’ilay soa iombonana. Manakorontana fotsiny, noho izany, izao ady an-trano eo amin’ireo samy mitonona ho mpanohitra ireo, nefa mila arahina, mila ahitsy ny dian’ny lamasinina…
Filoha mpamonjy voina